जवानीमै कपाल फुल्यो ? यसरी गर्नुस समाधान::kamananews
जवानीमै कपाल फुल्यो ? यसरी गर्नुस समाधान
कपाल फुल्नु एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । सामान्यतया यसले उम्मेर छिप्पिन थालेको संकेत गर्छ । तर, आजकाल कम उमेरमै धेरै मानिसहरुका कपाल सेताम्य हुन थालेका छन् ।
खासगरी गुणस्तरहीन स्याम्पु र सौन्दर्यका साधनको प्रयोगले समयभन्दा अगाडि नै धेरैको कपाल फुल्ने गरेको हो । केहीमा भने वंशाणुगत कारणले पनि कपाल चाँडै फुल्छ । यस्तै, थाइराइडले पनि यो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
कपालको जरामा मेलेनिन नामक कपाल रङ्गाउने कोषिकाले पिगमेन्ट बनाउन छोडेमा कपाल फुल्ने वा सेतो हुने हो । कपाल फुल्यो भन्दैमा आत्तिइहाल्नु पर्दैन । बजारमा उपलब्ध विभिन्न साधनहरुको प्रयोगद्वारा पनि कपाल फुल्ने समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । साथै, सेतो कपाललाई हटाउन वा लुकाउन पनि सकिन्छ ।
कपाल फुल्नुको सही कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । कपाल आणुवंशिक कारणले पनि फुल्न सक्छ । त्यस्तै, थाइराइडसम्बन्धी समस्या, तनाव, रक्तअल्पता, पिट्युटरी ग्रन्थिको समस्याका कारण पनि कपाल फुल्ने वा सेतो हुन सक्छ ।
गोराहरुको ३५ वर्षको उमेरमा नै कपाल फुल्ने गर्छ भने एसियाली र अफ्रिकनहरुमा ४० वर्षको उमेरदेखि नै कपाल फुल्ने गर्छ । त्यसैले, यदि कुनै कारणवस मानिसको उमेर अगावै कपाल फुल्न थालेमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
पत्रकार रवि लामिछानेले डिजिटल अस्पताल बनाउदै !के के छन् त योजना ?
रास्कोट सामुदायिक अस्पताललाई अब नमुना डिजिटल अस्पतालको रुपमा विकास गरिने पत्रकार रवि लामिछाने बताएका छन् । उनले अस्पताल बनाउनका लागि पार्टीको झण्डा नबोक्न सबैलाई आग्रह गरे । तीन तहका सर कार एक, हामी एक...
राजधानीमा स्वाइनफ्लुकाे संत्रास : केहीको मृत्यु, दर्जनौँ संक्रमित
स्वाईन फ्लुको नामले चिनिने एच वान एन वान भाइरसको कारण राजधानीमा केही बिरामीको मृत्यु भएको र दर्जनौको संख्यामा बिरामीहरु बिभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएको पाइएको छ ।बिषेश गरी जाडोको मौसम मा देखापर्ने यो भाइसरका...
स्मार्टफोनको बढी प्रयोगले के-के गर्छ असर ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, बाँदरको हातमा नरिवल । अहिले स्मार्टफोनको हकमा ठ्याक्कै यो उखान मिल्छ । हत्केलाभरको यो प्रविधि खासमा हाम्रो दैनिक जीवनका लागि एक अभिन्न सहयोगी बनेको छ । कसैसँग सम्पर्क गर्नु परेमा,...
भान्टा विश्वभरको भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी हो । बहुगुणी भान्टा नेपालमा पनि सहजै उपलब्ध हुन्छ । यसलाई ऐगल्पान्ट, औवरजीन, मेलोनजेन, ग्वाइना, स्कवास, गार्डेनऐग जस्ता नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । भाण्टा विभिन्न रंग र आकारका...
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले गर्यो अहिले सम्मकै दूर्लभ शल्यक्रिया
२८ पौष ,२०७५ काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले कपिलवस्तुका ४४ वर्षीय एक बिरामीको कलेजोको वरिपरि पलाएको ट्युमर (हेमान्जिओमा) को शल्यक्रिया गरी निकालेको छ । अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ शल्यचिकित्सक प्रा.डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा गत साता...
९ खराव वानी, जसले चाडै बुढो बनाउँछ
बुढो हुनु एक स्वभाविक जीवन-चक्र हो । हामी यौवन, युवाबाट गुज्रदै बुढ्यौलीमा प्रवेश गछौर्ै । बुढ्यौली, हामीले झेल्नैपर्छ । भोग्नैपर्छ । तर, हामीकहाँ बुढ्यौली जीवन निकै पट्यारलाग्दो, दिक्कलाग्दो हुनेगर्छ । तर, कतिपयले बुढ्यौलीलाई सहज बनाउँछ...
जैविक खानेकुराः भान्साको आवश्यक्ता
अहिले हामी दोधारमा छौं, खानेकुरालाई लिएर । हामीलाई थाहा छ, बाँच्नका लागि खानेकुरा खानुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, निरोगी रहन खानेकुरा खानुपर्छ । र, हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि, खानेकुराकै कारण हामी...
माघे संक्रान्ति किन र कसरी मनाउने ? (भिडियो सहित)
हाम्रा पूर्खाहरुले यो पर्व मनाउने चलन त्यसै सुरु गरेका होइनन् । माघे संक्रान्ति मनाउनुको खास अर्थ छ, सामाजिक, आर्थिक सबै दृष्टिले । यो पर्व स्वास्थ्य र समाजसँग पनि एकाकार छ । माघे संक्रान्ति भनेको जाडो...
क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ लगातारको खोकी
चिसोमा खोकी लाग्छ, रुघा लाग्छ । हामी ठान्छौं, चिसोको कारण यस्तो भयो । स्वभाविक हो, चिसोले खोकीको मसस्या निम्त्याउँछ । तर, खोकी लाग्नुमा चिसो मात्र कारण हुँदैन । यदि लगातार खोकी लाग्छ भने शंका गर्नुपर्ने...
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई विशेष संरक्षण,प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने !
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई विशेष संरक्षण गर्दै औषधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको औषधि परामर्श परिषद्को १५ औँ बैठकमा...